မကွယ်လွန်ခင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအတွက် အ မှတ် တရနောက်ဆုံးစာလေးတစ် စောင်ရေးသားထားခဲ့တဲ့ အဆိုတော် မီးမီးခဲ – XB Media Myanmar
အဆိုတော် မီးမီးခဲဟာ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းကပဲ ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ရောဂါဝေဒနာခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက် အနုပညာရှင်များနဲ့ ပရိသ တ် များကပါ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြရတာပါ။ မီးမီးခဲဟာ မကွယ်လွန်ခင်မှာ သူမချစ်တဲ့ပရိ သတ် တွေအတွက် နောက်ဆုံးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဆေးရုံမှာဘဲ အသံသွင်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက မီးမီးခဲမကွယ်လွန်ခင် နောက် ဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့ စာလေးကို ဝေမျှပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ” မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့ချိ န် ဘေးမှာ အမြဲရှိနေပေးတဲ့ ချစ်သူ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာကို ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ထုတ်ပြလာတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကလည်း ” အယ်တုန်းရေ…..
အယ် ကျွန်‌တော့်အတွက် ဒီစကားလေးကို‌ နောက်ဆုံး ရေးခဲ့ပေးတယ်…
(မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ချိန်မှာ ဘေးမှာ အမြဲရှိနေပေးတဲ့ ချစ်သူ….) တဲ့
အခု အယ်က ကျွန်တော့် ဘေးမှာ မရှိတော့ဘူး…
ဒါပေမယ့် အယ်ကျွန်တော့် အတွက်ရေးပီးဆိုထားတဲ့ (ငါ့ရဲ့မျက်ဝန်းညို) သီချင်းလေးလို ပဲ… .တစ်သက်လုံး ကျွန်တော်က အယ့် ရင်ဘတ်ထဲက မျက်ဝန်းညိုပါ… I LOVE YOU SO MUCH EH” လို့ ရေးသားထားတာလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက် ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
Source and Photo Crd- Brice Mee Mee Khel’s Facebook Account And Mee Mee Khel’s Facebook Page
အဆိုေတာ္ မီးမီးခဲဟာ မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းကပဲ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြား ခဲ့ၿပီပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ အ႐ြယ္နဲ႔မလိုက္ေအာင္ ေရာဂါေဝဒနာခံစားခဲ့ရတဲ့အတြက္ အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ပရိသ တ္ မ်ားကပါ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲခဲ့ၾကရတာပါ။ မီးမီး ခဲဟာ မကြယ္လြန္ခင္မွာ သူမခ်စ္တဲ့ပရိ သတ္ ေတြအတြက္ ေနာက္ဆုံးသီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ကိုေဆး႐ုံမွာဘဲ အသံသြင္းခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မၾကာေသးခင္ နာရီပိုင္းေလာက္ကလည္း သူမရဲ႕ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက မီးမီးခဲမကြယ္လြ န္ ခင္ ေနာက္ ဆုံးေရးသားခဲ့တဲ့ စာေလးကို ေဝမွ်ေပးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ” ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ခ်ိ န္ ေဘးမွာ အၿမဲရွိေနေပးတဲ့ ခ်စ္သူ ” ဆိုၿပီး ေရးသား ထား တာကို ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ထုတ္ျပလာတာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူကလည္း ” အယ္တုန္းေရ…..
အယ္ ကြၽန္‌ေတာ့္အတြက္ ဒီစကားေလးကို‌ ေနာက္ဆုံး ေရးခဲ့ေပးတယ္…
(ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ခ်ိန္မွာ ေဘးမွာ အၿမဲရွိေနေပးတဲ့ ခ်စ္သူ….) တဲ့
အခု အယ္က ကြၽန္ေတာ့္ ေဘးမွာ မရွိေတာ့ဘူး…
ဒါေပမယ့္ အယ္ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ေရးပီးဆိုထားတဲ့ (ငါ့ရဲ႕မ်က္ဝန္းညိဳ) သီခ် င္းေ လးလို ပဲ… .တစ္သက္လုံး ကြၽန္ေတာ္က အယ့္ ရင္ဘတ္ထဲက မ်က္ဝန္းညိဳပါ… I LOVE YOU SO MUCH EH” လို႔ ေရးသားထားတာေလးကို ပရိသတ္ေတြအတြက္ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ ေပးလိုက္ ရပါတယ္ေနာ္။
ကိုယ့်ပါတီ အာဏာရဖို့ ပြည့်သူ့ကျန်း မာရေးကို ပြန်မကြည့်ပေးတဲ့ ဘယ်ပါ တီ မဆို မထောက်ခံဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ခင်ပွန်းဦးဇေသီဟ